Inkuthazo exabisekileyo kwi-gvSIG -Ibhaso loMngeni we-Europa-iGeofumadas
Inkuthazo exabisekileyo kwi-gvSIG-Ibhaso loMngeni we-Europa
NgoJulayi, 2015 GvSIG, ezintsha
Kuyinto enhle ukwazi ukuba i-gvSIG ifumene ibhaso lamazwe ngamazwe ngethuba leYuropa.
Eli bhaso libonelela ngamathuba kwiiprojekthi ezizisa izinto ezintsha kunye nezisombululo ezizinzileyo kuluntu lwehlabathi. Ewe bayongeza ixabiso kwi INSPIRE iqhinga kwaye basebenzise iteknoloji efumaneka kwi-NASA World Wind.
Ihlabathi elijongene nehlabathi kukho iminyaka embalwa edlulileyo kuhlobo oluzimeleyo lodwa, olunokufana okuninzi kuGoogle Earth kunye nezibonelelo kwimiba efana nokulayisha iinkonzo ze-OGC kunye nezinto ezenziwa yinto yokudlala eyaziwayo kuGoogle kuphela kuhlobo oluhlawulelweyo. Kwakunokwenzeka kuphela ukufaka kwiWindows, nangona bekukho inguqulelo yeLinux; ngokuhamba kwexesha umoya wehlabathi uziphethe kwaye wathatha i-SDK ukuba isetyenziswe ngumhlali wonxibelelwano apho iindibano ezahlukeneyo zigcinwe ngoku, njengeProjekthi yeGoforge, iDapple, SERVIR-VIZ, Punt kunye neWW2D.
Njengomtsalane wokuqhubela phambili, kwiminyaka yamuva i-NASA kwi-INSPIRE umxholo iphumelele i-Award ye-Europa Challenge, esiyonwabileyo ukubona ijoliswe kwaye iphumelele isofthiwe ye-GIS engasese kwiindawo eziqhelekileyo zaseSpeyin.
Inzuzo ye-gvSIG ngeli bhaso
Isiseko se-GvSIG sinobuhle ekubheja kwiSynergy, ukubonisa ukusetyenziswa kwabo banikezele kwi-SDK ye-NASA World Wind, kwaye bayifake FOSS4G Yurophu phuculwa ngeveki e-Italy.
Eli bhaso liza kunika inkuthazo enomdla kwi-gvSIG, ethe kangangeminyaka eliqela yahlala ibonakala kwaye ikhula kwisakhelo seeNtsuku zaSimahla, ifikelela ngaphaya kwendawo yayo yokufukama. Ngaphandle komxholo weLatin American, apho i-gvSIG ifumene i-niche enomdla, ezinye iimeko ezinje ngoluntu lwaseRussia nolwe-Italiya olugcina imisebenzi ebalulekileyo luyabetha.
Iindaba ezimbi zihlala zihlala, nangona iindaba ezilungileyo azihlali zihlala zihlala zinyusa.
Sithanda ukuqikelela ukuba ezi ndaba ziyakongeza ngokuqinisekileyo, ngakumbi kuba iza kwiinyanga nje ezimbini emva kokuba sivukile isimanga sokuba uJorge Sanz eshiya iProdevelp. Siyazi kakuhle ukuba abantu bathatha indawo ezinkampanini, kodwa sikwaqinisekile ngokungabikho kwezinto abazenzayo xa besenza igalelo elihle kubahlali abathatha inxaxheba kulo, ngakumbi ukuba imiceli mngeni emitsha ibonakalisa izithintelo ezazifudula zisisiqhelo sokuzonwabisa. Khange ndiyifumane indlela yokukhankanya ukwehla kuka-Xurxo kwelicala, kodwa emva kwentlonipho endiyigcinayo kubungcali bakhe kunye nomdla wentsebenziswano, nokuba siyathanda okanye asithandi, siza kumkhumbula. Siyathemba ukuba uyayazi indlela yokuhlala ukhuthele kwinto oyaziyo ukuba ungayenza njani kwaye unokuyichaza ngolu hlobo: ungeze kwi-enthusiastic pragmatic.
Ekugqibeleni, isigqibo se-Europa Challenge sinika ukubonakala kwi-gvSIG, ekhoyo ngoku inemiqobo enzima ngokufuna amanye amaziko axhasayo angenza oko okwenziwa ngumphakathi ngokwawo kwaye ofuna ukubonwa ngumbono, ngokukodwa ekuphuhliseni, kunokuba ukwakheka kunye nokufakelwa kwezinto okwangoku kwanele kwaye kwanda.
Iimpembelelo kunye neenjongo
Kusexhalabisa njengokuba ukubonakala kwe-gvSIG kwiindlela zikaGoogle kufikelele kwithafa lawo kunye nelona xesha lilungileyo ngo-2009 nango-2011, kodwa kule minyaka mithathu idlulileyo iye yehla. Oku kufuneka kuboniswe kwisixa sokukhutshelwa kwesoftware, imisebenzi yoluntu kunye nabaphuhlisi; Ndithetha zombini ezisesikweni ezivela kwiAkhademi okanye utyalomali oluxhaswayo kunye noboya abenza ikhowudi kumagumbi azele ngumsi kunye nebhiya.
Ngokwethu, sikholelwa ukuba i-gvSIG iya kugcina umgca ozinzileyo eluntwini othanda iJava kunye nekhowudi yasimahla. Nangona izakuba ngumceli mngeni omkhulu ekulawuleni izibonelelo zemali, imanyano kunye nokukhuthaza ukukhula kwemisebenzi ecetyiswayo kukungabi namonde okunokunyusa ukubonakala kwimeko yeAnglo-Saxon. Ngokukodwa kwinqanaba labasebenzisi bokugqibela abakhangela i-Intanethi kwizimvo zabanye abantu.
Ngokuqinisekileyo, akukho lula ukuba semva kweenkcukacha-manani, kodwa yile nto ibekwe kuyo umlinganiso, ngakumbi kwimeko yemithombo evulekileyo. Impembelelo yokungabinazo izibonelelo zoqoqosho ezifanayo njengeminyaka emi-5 eyadlulayo, ukuphulukana nezixhobo zobugcisa ezinexabiso eliphezulu, okanye ukujamelana nokudodobala kwezoqoqosho kwimeko yamaqabane acwangcisiweyo, inokuthi isuswe ngokuhlaziya izicwangciso zokuqonda ezibonakala ngathi zisebenzela iprojekthi kadade (QGIS ) ukuba, ngo-2011, ikwazile ukukhula kumanqanaba angahambelaniyo, njengoko kubonisiwe kwigrafu edibeneyo yezixhobo zimbini.
Xa kufikwa kuzinzo, sukuvumela nokuba lithuba elincinci. Njengomzekelo, kufuneka sijonge ukuba kwenzeka ntoni ngeeprojekthi zentsebenziswano yaseLagina eMelika ezikhuthazwa yimali yamazwe amabini, yamazwe amaninzi okanye yokuguqula amatyala asuka eYurophu anolwazi oluncinci okanye aya kuthanda kwi-gvSIG; ngekhe kubi ukujonga okwenzekayo ngomyalezo abawufumanayo.
Kuya kufuneka sicacise ukuba kwindalo yezisombululo zasimahla, olu ayilo khuphiswano kodwa kukudibana. I-gvSIG ikhona yeJava kunye ne-QGIS ye-C ++, zombini kwiqonga lomnqamlezo; Iprojekthi ye-GIS yeJava iya kuhlala iyimfuneko, okoko igcina imeko enomdla kwimeko zophuhliso. Kunika umdla futhi ukuba akuzange ngaphambili imodeli ye-OpenSource kunye nophuhliso loluntu olunentsebenziswano lube lolwexeshana njengokuba kunjalo namhlanje; Kuya kufuneka ubone ukubethwa zizikimu zemveli ezinike amanyathelo afana neOpenStreetmap, iWikipedia, iWordPress, ukubala nje ezimbalwa. Kodwa kufuneka sazi ukuba kwihlabathi lehlabathi esiphila kulo namhlanje, ukuphakamisa ukuhla komjikelo wobomi bemveliso kunokwenzeka kuphela ngokuxhasa ngendlela elungeleleneyo imilenze embalwa apho ishishini lobuchwephesha obuvulekileyo ligcinwa khona: Inkunzi, ezintsha kunye noluntu.
Siyakholelwa ekubeni iqhinga lokusebenzisana ne-NASA ye-Wind Wind SD linyathelo elibalulekileyo ukunqanda ukutyala imali ekuphuhliseni into esele ikho kwaye engadingi kuphinda yenziwe kwakhona. Sikwakholelwa ukuba amalinge afana nala anokwenziwa ixesha elide (ukuthetha ngokuqhubekeka kwenkqubo yokufukama ye-OSGeo kunye nokusebenzisana namathala eencwadi okwamkela i-geek) kwaye, ngaphaya kokuphuculwa kwezixhobo, sisigqibo esinomdla sokusebenzisana okumgangatho wehlabathi.
Ngaphandle kokubonakala ngathi akukho themba kwinxalenye yenqaku, sifuna ukuhambisa uhlalutyo olwakhayo. Sivuyisana nabo bonke abasebenzisi be-gvSIG abathe baxhasa ukukhula kwabo ngomzamo omkhulu. Siyavuyisana nabakhuthazi ngale mpumelelo kwizinto ezintsha eziya kuthi ngokuqinisekileyo zizise iziqhamo zokubonakala kunye nemanyano emitsha.
Más información: Ibhulogi yeSiseko seGvSIG
Umhlaba ka-Google GvSIG OS QGIS
Post edlulileyo«Ngaphambilini Isatifikethi seCadastral Certificate esisuka kwi-CAD / GIS
Post Next Ukuphefumlelwa-Iindlela eziqhubekayo kubuchwephesha be-GIS-ESRI UC kusuku lokuqalaOkulandelayo »